तालमा माछापालन | eAdarsha.com
१. पोखरा तालको सहरको रुपमा पनि चिनिन्छ । पोखरासँगैको लेखनाथले पोखरा महानगरमा जोडिनु अघि आफुलाई अलग्गै सात तालको सहर को रुपमा चिनाउने गर्दथ्यो । पोखरामा रहेको फेवा र बुडुवा तथा लेखनाथमा रहेको वेगनास, रुपा, खास्टे, मैदी, गुँदी, न्यूरेनी, दीपाङ गरी यहाँ नौ वटा ताल रहेका छन् । पोखरा–१३ मा रहेको बुडुवा तालको चर्चा त्यति भएको पाइदैन ।
२. ताल पर्यटकका लागि दृष्यावलोकन, डुङ्गा चलाएर मनोरञ्जन मात्र नभएर मत्स्य पालन गरी आय आर्जन गर्ने माध्यम पनि हो । फेवा, वेगनास र रुपा तालको माछा प्रसिद्ध छ । फेवा र वेगनास तालमा मत्स्य विकास केन्द्र सञ्चालित छ । ती केन्द्रबाट माछाका भुरा उत्पादन गरी विक्री वितरण हुँदै आएको छ । यसैगरी पोखरा, वेगनास र रुपामा केजमा माछा पालन गरिएको छ । स्थानीय जलहारी लगायतका समूहले आ–आफ्नै किसिमले माछा पालन गर्दै आएका छन् ।
३. हाल आएर खास्टे, दिपाङ, न्यूरेनी, गुँदी, मैदी तालमा पनि सामुहिक रुपमा माछपालन गर्न थालिएको छ । केही तालहरुका सहकारीहरुले नै लगानी गरेर माछाको उत्पादन सुरु गरिसकेका छन् । खास्टे कृषि तथा मत्स्य सहकारी संस्थाले खास्टे र गुँदेमा माछा पालन गरेको छ । यसैगरी दिपाङ तालमा पनि दिपाङ मत्स्य तथा कृषि सहकारीले माछा उत्पादन सुरु गरी सकेको छ । मैदी ताल संरक्षण विकास समाजले पनि मैदीमा माछाको भुरा छाडी काम अघि बढाएको छ । अरु तालमा पनि सामुहिक माछापालन सुरु भएको छ ।
४. फेवा, वेगनास, रुपा बाहेकका तालहरु साना रहेको, त्यसमा पनि हिउँदमा पानी धेरै कम हुने र कतिमा त दलदल मात्र रहने गरेको अवस्था छ । ती तालहरु सरसफाई गरी पुरिएको माटो निकाल्नु पर्ने र तालको सीमा सम्म नै पानी अडिने अवस्थामा पुर्‍याउन लगानी आवश्यक छ । ती कार्यका लागि स्थानीय श्रोत साधनको कमी रहेकोले महानगर तथा प्रदेश सरकारको पनि सहयोग जरुरी छ । प्रत्येक तालमा गुरुयोजना नै तयारी गरी त्यसको सक्दो उपयोगको नीति बनाउनु पर्दछ ।
५. मत्स्य पालन पर्यटनका लागि पनि आकर्षणको विषय हो । तालको संरक्षणमा माछापालन नै सहयोग पुग्दछ । तालमा माछा हेर्न, माछा मार्न तथा माछा खानाका लागि पनि मानिसहरु आउने गर्दछन् । मत्स्यपालनबाट धेरै रोजगारी पनि बढ्छ । ताल मात्र होइन पानीको सुविधा भएको ठाउँमा पोखरी खनेर पनि माछापालन गर्न सकिन्छ । माछाको उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बन्ने प्रयास गर्नुपर्दछ ।